ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5အမှုအရာ Celebrities Relationships အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်တော်မူပါနိုင်သလား
5 အမှုအရာ Celebrities Relationships အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်တော်မူပါနိုင်သလား
အဆိုပါသတင်း ဂျော့မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အလျင်အမြန်အမဲဆီမီးကဲ့သို့ပျံ့နှံ့သွား "အတည်လူပျိုကြီး" ၏; တိုင်းပြည် shocking, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမျိုးသမီးတွေမျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း.
ဒါဟာ "အတည်ပြုခဲ့သည်" ရဲ့: အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဂျော့ခ်ျသည်အိမ်ထောင်သည်လာပြီ!
ကတိကဝတ် phobia အမှန်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ကြောင်းသက်သေပြသွားမည့်.
အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အဘို့အ glitz, အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ, ပိုက်ဆံ, ဘုန်းအသရေနှင့်, အခါချိန်းတွေ့နှင့်မိတ်လိုက်ရန်လာ, ငြင်းခုံဘွယ်မရှိနိုင်သည်ကိုတဦးတည်းအရာတစုံတခုမျှမရှိင်: ကြယ်ပွင့်အကိုရာကြွင်းလေသမျှနှင့်တူကြပါ၏.
မှန်တယ်. ကျွန်တော်တို့မကြာခဏရုပ်တုအဖြစ်မည်သို့ကိုးကွယ်နှင့်ဆန္ဒပြင်းပြသောထိုရှေးရှေးကဲ့သို့ဖြစ်ရမှ, ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့သို့အလားတူပြဿနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအချို့နှင့်အတူရုန်းကန် "မျှသာလောကဓံ။ "
မလုံခြုံမှုတူအမှုအရာ, ကလေး mama ဒရာမာ, စိုးရိမ်မှုတွေ, ရှုပ်ထွေးမှုများ, နှင့်ဖောက်ပြန်– အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ. မတ်ေတာ Proving အဆုံးစွန် equalizer ဖြစ်ပါသည်.
နာမည်ကြီးတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစိစစ်ကြပါသည်, ဝေဖန်ခံရတဲ့အမျိုးသားရေးဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ထွက်ကစား, အများပြည်သူကြည့်ရှုများအတွက်.
ဒီအတိုင်းတော့, ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကသူတို့အလွန်မြင်နိုင် "အခန်းကဏ္ဍ" နှင့်အချစ်သီချင်းထံမှသင်ယူနိုင်အနည်းငယ်သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်.
1. ဖောက်ပြန် "အခြားမိန်းမ" prettier ဖြစ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်စားပွဲပေါ်မှာဖို့ပိုဆောင်ခဲ့အကြောင်းကိုအမြဲမဟုတ်ပါဘူး. ကံမကောင်းစွာပဲ, ယောက်ျားတွေဟာအမြဲတမ်း "တက်ကုန်သွယ်မှု။ " မပါဘူး
လှသောအဆင်းကိုစဉ်းစားပါ, ထက်မြက်သည့်, သတင်းများအရအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ခဲ့ကြသူဟောလိဝုဒ်နှင့်ပြည်သူ့ကိန်းဂဏန်းများတွင်ဦးဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်: Halle Berry ဟာ, Sandra Bullock, ဂျနီဖာ Anniston, မာရီယာ Shriver. ကျနော်တို့ဒီမှာဘာသင်ယူနိုင်? ဖောက်ပြန်လူတစ်ဦးအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ခံနေရထက်အခြားသူတစ်ဦး၏အရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုဖြစ်ပါသည်. ခါးသောမရှိကြ, ပိုကောင်းမည်.
2. ပိုက်ဆံအမြဲပျော်ရွှင်မှုကိုမဝယ်နိုင်. စာရင်းအင်းများ America မှာကွာရှင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းတရားများများထဲမှပိုက်ဆံကြောင်းကိုပြသ. သေး, ဟောလိဝုဒ်ရှိ, ကျော်ကြားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အများစုကအစဉ်အဆက်တစ်တသက်တာမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ထက်ပိုငွေသားရှိသည်ဘယ်မှာ, "ပရဒိသုတွင်ဒုက္ခ။ " ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဟာအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းကိုဖတ်ပြီး, အာဏာရုန်းကန်မှုများ, စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ, အမျက်တော်ထွက်စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်ဖောက်ပြန်. သာကြွယ်ဝမှုအမြဲပျော်ရွှင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးတော်မမူကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ဒါဟာဝင်.
3. အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်က "စာချုပ်ကျူးဖြစ်နေစရာမလိုဘူး."ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်သူမ၏ Choreographer cutie မှာကြည့်ပါ, Casper. ဒီစုံတွဲသည်တစ်နှစ် 20 အသက်အရွယ်ပြန့်ပွားလောက်ရှိတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ Fabulous တစ်လျှောက်ရတဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာ. တကယ်တော့, ဤသည်နေ့ရက်ကာလသူမ၏မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခုမပါဘဲ JLO ကြည့်ဖို့ရှားပါးသောကြောင့်န်. သင်သည်မိန်းကလေးသွား!
4. Confirmed ဘွဲ့နှလုံး၏အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိနိုင်သည်.
တစ်ခါတစ်လေညာဘက်သောမိန်းမကြာ. အခြားကြိမ်, အချိန်ကိုက်ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်. ဘယ်တော့မှလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့.
5. "ပထမဦးဆုံးမှာသင်အောင်မြင်မထားဘူးဆိုရင်, ထပ်ကြိုးစားပါ။ " သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်မိတ်ဖက်များနှင့်ကျွန်တော်နှင့်အတူအချို့ကြယ်များကိုမျက်မြင်င်အကျဉ်းချုပ်ကြုံတွေ့မှု၏လည်ပတ်မှုတွေ့ကြုံခံစားလို, သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်နဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကပြောသည်ခံရဖို့တစ်ခုခုသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေတ္တာကိုပုံပြင်များဖို့ "ပျော်စရာဇာတ်သိမ်း" ရေးကူးပေးနိုင်တဲ့ရှိပါတယ်, မေတ္တာပွင့်လင်းကျန်ရှိနေဖြင့်. ဥပမာအားဖြင့်, စတိဗ် Harvey တူနာမည်ကြီးတွေ, ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်, ဧလိရှဗက် Burton, နှင့် Demi Moore တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုပြီးအတန်းမှာဆင်းလှည့်လည်. သူတို့ရဲ့ယူဆဒဿန? နောက်ဆုံးမှာ, ကကပ်ရန်ကိုချည်နှောင်မယ်.
ကြယ်ပွကျွန်တော်တို့ကိုဖျော်ဖြေ. တစ်ခါတလေသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပညာပေးနိုင်ပါသည်. ဤငါးခုသင်ခန်းစာတွေကိုဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးသဖြင့်အစေခံ. ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့ကိုဂရုပြုသင့်ပါသည်.
5 တစ်ဦးကပထမဦးစွာနေ့စွဲသည်ခွေးများအတွက် Friendly အကြံဉာဏ်များ
Key ကိုအနောက်စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူဖလော်ရီဒါ